Wasaaradda Caafimaadka Oo Diiwaan Gelisay Xaalado Cusub Oo COVID-19 Ah – Banaadir weyne
Muqdisho – Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta Feyruska Karoona waxay ku xaqiijisay in 24-kii saac ee ugu dambeeyay guud ahaan dalka laga diiwaan geliyay 47 xaalado cusub oo COVID-19. Waxaa cudurka ka bogsooday 13 qof, waxaana geeriyooday hal bukaan.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa caddeysay in 38 kamid ah bukaannada la xaqiijiyay ay rag yihiin halka 9-ka kale ay yihiin haween.
28 ka mid ah bukaannada cusub waxaa laga diiwaan geliyay Somaliland, Gobalka Banaadir 9, Puntiland 5 iyo Jubbaland 5 qof.
Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 2,023, waxaa bogsootay guud ahaan 361 ruux. Halka 79 ruux oo kale ay u geeriyoodeen cudurka.
Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa ugu baaqday mawaadiniinta Soomaaliyeed guud ahaan inay qaataan talooyinka caafimaad iyo wacyi gelinta looga digayo qatarta cudurka, qaybta uga aadanna ay ka qaataan dadaallada ka hor tagga iyo xakeynta Feyruska Karoona. – Radio Mogadishu